Gixy, Pandora, Pire, Porto နှင့် Rep: Yandex Open Source - အပိုင်း ၂ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 27/07/2021 06:00 | applications များ
ဒီနှင့်အတူ ဒုတိယ အပေါ်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးကနေ "Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်" ကျနော်တို့၏ catalog ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် အက်ပ်များကိုဖွင့်သည် ကတီထွင်ခဲ့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de "Yandex LLC".
ပြီးတော့ အပိုင်း အကြောင်းကိုဒီစီးရီး၏ "Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်":
1 YxOS-P2: Yandex ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် - အပိုင်း ၁
1.1.5 မျိုးပွားနိုင်သောစမ်းသပ်မှုပလက်ဖောင်း (REP)
YxOS-P2: Yandex ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် - အပိုင်း ၁
တွင်ဖော်ပြထားသောစီမံကိန်းများ၏စာရင်းမှ "Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်" အောက်ပါ app များဖြင့်စတင်ပါမည် GitHub ၏အဓိက site:
Gixy သည် Nginx ပြင်ဆင်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Gixy ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာလုံခြုံရေးအမှားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် bug များကိုအလိုအလျောက်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်ထောက်ပံ့ထားသော Python version များသည် ၂.၇၊ ၃.၅၊ ၃.၆ နှင့် ၃.၇ တို့ဖြစ်သည်။ သတိပြုရမည်မှာ Gixy သည် GNU / Linux ပေါ်တွင်သာကောင်းကောင်းစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ အခြား Operating Systems များသည်ပြproblemsနာအချို့ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၎င်း၏အကြား အဓိကအင်္ဂါရပ်များ အောက်ပါအသစ်အဆန်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စွမ်းကိုဖော်ပြသည်။
[http_splitting] HTTP အုပ်စုခွဲ။
[မူရင်း] ရည်ညွှန်း / မူရင်းအတည်ပြုခြင်းနှင့်အတူပြIssနာများ။
[add_header_redefinition] "add_header" ညွှန်ကြားချက်ကိုအသုံးပြုပြီးခေါင်းစီး၏အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်။
[host_spoofing] တောင်းဆိုချက်၏ host header ကိုမေ့ခြင်း။
[valid_referers] valid_referers ၌အဘယ်သူအားမျှ။
[add_header_multiline] Multiline တုံ့ပြန်မှုခေါင်းစီးများ။
[alias_traversal] မှားယွင်းစွာပြင်ဆင်ထားသော alias ကို ဖြတ်၍ လမ်းကြောင်း၏လမ်းကြောင်း။
Mucha ပိုမိုသိရှိလိုပါက အပေါ် Gixy အောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် link ကို.
Pandora သည် Go ဘာသာစကားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောအားသွင်းစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် HTTP (S) နှင့် HTTP /2အတွက်ပံ့ပိုးမှုရှိပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်ဝန်အခြေအနေများကို Go ၌ရေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်စမ်းသပ်ခြင်းမခံရမီကပင်ပြုစုသည်။ "
Mucha ပိုမိုသိရှိလိုပါက အပေါ် ပန်ဒိုရာ အောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် link ကို.
“ ဒါဟာ Perl Incompatible ပုံမှန် Expressions စာကြည့်တိုက်တစ်ခုပါ။ ဤစာကြည့်တိုက်သည်ပုံမှန်အသုံးအနှုန်းများအတော်များများကိုဆန့်ကျင်။ များစွာသောစာသားများကိုစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်၊ သင်ပေးထားတဲ့စာသားဟာပုံမှန်စကားရပ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် regexps ပေါင်းများစွာကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း regexps (၁၀) ခုလောက်စစ်ဆေးနိုင်အောင်အတူတကွပေါင်းစပ်လို့ရပါတယ်။ "
Mucha ပိုမိုသိရှိလိုပါက အပေါ် ခွေးလှေး အောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် link ကို.
Porto သည် Yandex တီထွင်ထုတ်လုပ်သည့်အခြား Linux container system ဖြစ်သည်။ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ cgroups, namespaces, mounts, networks, စသဖြင့်အမျိုးမျိုးသော Linux subsystem များအတွက်တစ်ခုတည်းသော entry point တစ်ခုဖြစ်သည်။ Porto သည်ကြီးမားသောအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်း၏အကြား အဓိကအင်္ဂါရပ်များ အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြထားသည်:
အသိုက်ပြုသော virtualization ကိုထောက်ပံ့သည်။
Mucha ပိုမိုသိရှိလိုပါက အပေါ် Porto အောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် link ကို.
“ ဒေတာအခြေပြုသုတေသနကိုတသမတ်တည်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အိုင်အီသွန်းအခြေပြုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သို့မဟုတ်အခြားရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဟာလူသားတွေအတွက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "
ကွဲပြားခြားနားသော ML စာကြည့်တိုက်များအတွက်ပေါင်းစည်း Python ပတ်ထည်ပါဝင်သည်။
ဂရပ်များနှင့်အတူခွဲခြား / ဆုတ်ယုတ်အစီရင်ခံစာများပေးထားပါတယ်။
၎င်းတွင်အပြိုင်ကွပ်မျက်မှုနှင့်အတူ smart grids များကိုရှာဖွေခြင်းအတွက် algorithms များပါဝင်သည်။
ဒါဟာ git မှတဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ဗားရှင်းရှိပါတယ်။
၎င်းတွင် meta-algorithm ဒီဇိုင်း (Rep-lego) ရှိသည်။
Mucha ပိုမိုသိရှိလိုပါက အပေါ် rep အောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤဒုတိယတူးဖော်ရေးအပေါ် «Yandex Open Source», Technological Giant မှတီထွင်ထားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သော application များကိုပေးသည် «Yandex LLC».
ဒါ့အပြင်တစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါစေ «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်ရရှိနိုင်သောလျှောက်လွှာများ၏ဂေဟစနစ်၏တိုးတက်မှု၊ ကြီးထွားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့မှုတို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည် «GNU/Linux»။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လိုင်းများ၊ အုပ်စုများသို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်များသို့မဟုတ်စာတိုပေးပို့ရေးစနစ်များတွင်အခြားသူများအား၎င်းကိုမျှဝေခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်။ နောက်ဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏မူလစာမျက်နှာသို့သွားပါ «FromLinux» သတင်းများပိုမိုရှာဖွေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ချန်နယ်ဖြစ်သည် DesdeLinux မှကြေးနန်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Gixy, Pandora, Pire, Porto နှင့် Rep: Yandex Open Source - အပိုင်း ၂